[Ukara] Wondershare SafeEraser: Hichapụ ekwentị Data-adịgide adịgide
Ofụri Esịt dakọtara na ọhụrụ Windows 10, Android 6.0 Marshmallow, iOS 8.4 / iOS 9, iPhone 6s na iPhone 6s Plus
Gbalịa Ọ Free Windows 10/8/7 / Vista / XP Buy Ugbu a
Chebe gị Personal Information na SafeEraser
Anyị ngwaọrụ nwere ichekwa ego na bank ọmụma, logins, ozi ịntanetị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ihe ọtụtụ ndị na-amaghị bụ na ehichapụ data bụ recoverable. Ihichapụ ewepu na n'ụzọ na-eduga na ọmụma kama ọ bụ ka recoverable na nri ngwaọrụ. SafeEraser ana achi achi na ozi gị bụ nchebe site na-adịgide adịgide erasing ehichapụ faịlụ, na-ekpocha nchọgharị akụkọ ihe mere, caches ma na-echebe onwe gị ozi. A ana achi achi gị ehichapụ data mụ na ụzọ na-adịghị ejedebe na-aka nke data omempụ.
Wepụ ehichapụ faịlụ-adịgide adịgide
Ọ bụrụ na ị ka na-eji gị na ngwaọrụ ma chọrọ iji hụ na mbụ ehichapụ data bụ unrecoverable mgbe ahụ a nhọrọ ga-enyere gị aka ịhụ ihe data ka na-anọgide na ngwaọrụ na na na na faịlụ ị na mbụ ehichapụ abụkwaghị inweta ma ọ bụ recoverable ọbụna na ọhụrụ software.
Ihichapu Ngwaọrụ-adịgide adịgide
Na onye ahụ faịlụ nhọrọ ngwá ọrụ ọ dị mfe na-adịgide adịgide wepụ faịlụ na ị don'twant mgbe idebe ndị ị na-eme.
Ọ bụrụ na ị na-ere, trading ma ọ bụ Recycling gị iphone ma ọ bụ Android ngwaọrụ mgbe ahụ SafeEraser si otu-click ekwentị ihichapu nhọrọ nwere ike ime ka ekwentị gị mma tupu agafe ya. Factory nrụpụta bụ ezughị iji wepụ gị data ma na-eji a ọkachamara data mbibi ana achi achi na ozi gị bụ nchebe n'agbanyeghị onye aka ya adaghị.
Ehichapụ Data Erasure
SafeEraser bụghị nanị na-akwado foto & videos ma na-echebe gị oku na ndekọ, ozi na ndị ọzọ ebe a >>.
-Maara nke ndị omempụ onye nwaa eji ngwá electronic ihe onwe onye ọmụma ma na-echebe onwe gị si amata na-ezu ohi na igwu wayo.
Full ekwentị Erasure
Ozi, oku History, Facetime, kọntaktị, Mail, Kalinda, Nchetara, Edeturu, Voice Memos, Safari ibe edokọbara, Photos, Videos, ngwa ọdịnala, System Ntọala, Keyboard Cache, Passbook, iTunes dB, iMessage, Safari ọkacha mmasị, Safari History, oziolu, Apple ID, iCloud ID, Game Center, Apple Maps, Weather, ebuka, ọdụ akwụkwọ akụkọ
Doro Anya Private Data & Free Up Space
Ekwentị gị na-echekwa ọdịnaya site eme nchọgharị na weebụ, na-ezipu ozi, na-eji ngwa ọdịnala na ndị ọzọ. SafeEraser na-eme ka n'aka na data ị na-achọghị ọha mụ onwe. Iji US Military usoro nke ebibi data, onwe data ga-sụgharịrị unrecoverable, gwakwara elu ohere, ma na-eburu ozi nkeonwe gị mma.
Speed ​​Up Ngwaọrụ
Clean ratụ ratụ Files
Na SafeEraser si 1-Click nzacha na mkpocha, na ị na ngwaọrụ ga-eme na ezigbo gbapụrụ ọsọ site na iwepu junk faịlụ na unneccessary ndabere Filiks.
Free Up Nchekwa
Speed ​​Up ekwentị gị
Gbalịa SafeEraser maka 15 ụbọchị na-enweta na ike scanning ike. Ị ga-enwe ike ịhụ ngwangwa faịlụ, ma ị gaghị enwe ike ihichapụ ha. Maka zuru Ihichapụ arụmọrụ, ịzụta zuru version. Na-akwado iPhone (iOS 6.1.6 na elu) na Android ngwaọrụ (si gam akporo 2.1 ka Android 6.0).
Wondershare SafeEraser Chebe Your Nzuzo
Download ugbu a N'ihi Windows 10/8/7 / Vista / XP
Nyocha ahịa anyị Ịhụnanya SafeEraser - na ị ga-, Oke
dị ka ezi
otú ahụ ihe ọma na mma na-arụ ọrụ
Na-eme ihe ọ na-azọrọ na e na tech support bụ nnọọ anabata aka.
Gịnị na-eme mgbe m na-emeghị ihichapu data?
Olee otú iji weghachi ngwaọrụ ma ọ bụ mechie "Chọta m ngwaọrụ" mgbe ị na-efu ndị paswọọdụ nke iCloud.
Olee otú dozie data furu efu nsogbu mgbe disconnecting ngwaọrụ mgbe wiping ehichapụ data incompletely